किन राख्दैछन् पूर्वराजाले डिनर सहित भेला » खबरहरुको एउटै केन्द्र
किन राख्दैछन् पूर्वराजाले डिनर सहित भेला
क-कसलाई छ निम्ता ?
मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ २२:१४ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । प्रदेश ४ को भ्रमणमा निस्कनुअघि राजनीतिक डिनर आयोजना गर्ने विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले परामर्श थालेका छन् । प्रदेश १ को भ्रमणबाट काठमाडौं फर्केलगत्तै भेटघाटमा व्यस्त पूर्वराजा शाहले विभिन्न राजावादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट थालेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार भेटघाटका क्रममा पूर्वराजा शाहले केही दिनपछि बृहत् डिनर कार्यक्रम राख्ने र त्यो कार्यक्रममा सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाउने योजना रहेको सुनाएका छन् । प्रमुख दलका नेताहरू आइदिँदैनन् कि ? भन्ने आशंकाका विषयमा पनि उनले चासो देखाएको बुझिएको छ । पूर्वराजासँग हालै भेटेर फर्केका एक धार्मिक कार्यकर्ताका अनुसार यतिबेला पूर्वराजा राजसंस्था पुनस्र्थापनामा भन्दा पनि राष्ट्रिय अखण्डता र सनातन हिन्दू राज्य कायम गराउने अभियानमा छन् । यस विषयमा उनले मुख्य राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण नेताहरूलाई समेत गोप्य रूपमा भेटघाट गरिसकेको राजावादीहरू बताउँछन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार आफूलाई अति राजावादी देखाउनेहरूसँग पनि पूर्वराजा शाह सशंकित देखिएका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्– ‘मेरो रेकर्डमा राजतन्त्रको पक्षका संघसंस्थाको संख्या ४५६ वटा छन् । प्रत्येक संस्थासँग एक हजारजना हुने हो भने पनि करिब पाँच लाख संख्या हुन्छ, तर ४५६ संस्थाहरूका मान्छे जम्मा गर्दा चार सय पनि पुग्दैन किन ?’ प्रदेश १ को भ्रमणका क्रममा पनि विभिन्न संस्थाको ब्यानर टाँगेर पूर्वराजालाई भेट्न जानेहरूको लाइन नै देखिएको थियो । भेटघाट गर्न आउनेहरूलाई उनले भन्ने गरेका थिए– ‘तपाईहरू एउटै छातामुनि आवद्ध हुनोस्, यसरी छरिएर राम्रो भएन ।’
PREVIOUS POST Previous post: यी हुन अहिलेसम्म नेपालमा गएका ठुला भूकम्पहरु (भिडियो सहित)
NEXT POST Next post: तपाईको लागि आजको दिन कस्तो ? हेर्नुस आजको राशिफल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ २२:१४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ २२:१४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ २२:१४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ २२:१४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख ११, २०७५ २२:१४